Kunyange zvazvo Lenovo yakangoita itsva mukugadzira mapepa ekutamba, maLegio avo ane mimwe mitengo yezvinhu zvakanakisisa mune imwe nzvimbo.
Muchikamu chino tinenge tichitaura nezvenzvimbo yavo yekutsvaga yepamusoro yebhuku rekutsvaga ye2018 uye chikamu chokutanga che2019, Legion Y530, kukoshesa kwakanyanya Legio yakakurumbira gore rakapera Y520 series.
Ichi ndicho chimwe chezvinyorwa zvepamabhuku zvinotengesa zvakanyanya zvakagadzirwa paIndel 8th gen hardware uye Nvidia GTX 1050 / 1050 Ti mifananidzo, ine mutengo wekutanga we $ 750 muU.S. / 800 Eur muEurope panguva ino ino. Kubatana kwaro kwakagadzirwa, tsvina yakachena, yakanaka backlit keyboard uye IPS screen pane mamwe mabhizimisi ayo ekutengesa, pamwe nebheteri yakakura zvakakwana uye sarudzo inotonhorera iyo inonyanya kushanda zvakanaka kubva kune hardware mukati.
Zvisinei iwe uchazobvuma kugadzirwa kweplastiki yose, iyo 60 Hz skrini ine chete yepakati-yepamusoro pepane, cluncky touchpad kana kuti isiri RGB keyboard, asi izvi hazvifaniri kunge zvichange zvisingabvumirane nevatengi venyu, kunyanya kubvira iwe uchawana mashoma mashomanana emakwikwi mumutengo wemari.
Takapedza nguva nekutengeserana kweLegio Y530, mwedzi yakaverengeka mushure mokutangira nyaya dzakatangwa, nguva yakakwana yekugadzirisa nyaya dzingangodaro dzevatambi vekutanga. Kunze kwekuongorora yunivhesiti ndechekugadzirisa kwepamusoro-soro, neI7-8750H protoor uye GTX 1050 Ti maikirwo, zvirongwa zvinowanikwa kubva munaAugust 2018 yepamadhora $ 1000 muU.S. uye 1000 EUR kupfuura pano padziva.
Takaunganidza zvese zvatinoona pasi apa, saka verenga paunenge uchida kuziva kuti Lenovo Legion Y530 inopfuura neipi, iyo inowira pfupi uye kuti ndiyo yakakodzera kutenga yako kana kwete.
Screen 15.6 inch, 1920 x 1080 px, 60 Hz, IPS, kusabata, matte
ndangariro 8 GB DDR4 (2x DIMM)
chengetedzo 1 TB 7200 rpm HDD (2.5 ") + isina chinhu M.2 PCIe slot
bhatiri 51.5 Wh, 135 W goroja
zera 365 mm kana 14.37 "(w) x 260 mm kana 10.24" (d) x 24.2 mm kana 0.95 "(h)
uremu 5.15 lbs (2.34 kg) + 1.3 lbs (.59 kg) yejaja
Zvinhu zviviri zvakakosha zvinogadzirisa Legion Y530 kubva kune dzakawanda zvimwe zvekupinda uye pakati pepakati pamakadhi ekubhejera: kutarisa kwakachena uye kugadzirisa mafomu.
Mamwe mabhuku ekuverenga mabhuku anotora mashoma akasiyana emakero, logos uye magetsi anongorira "Iwe, tarisa kwandiri, tarisa kwandiri, ndiri muteereji wepakombiyuta!". Legion Y530 ndeimwe yezvishoma zvisiri izvo, zvine nyeredzi yemaest aesthetics, isina mavara uye chiedza chimwe chete chisinganzwisisiki chinonyatsobatanidza zviri mukati meEGION kudisa pavhavharo. Unoona kuti pane imwe chete yeLenovo logo pakombiyuta iyi, yakavanzwa mushure mekuratidzwa, sezvavari kuedza kusimudzira mararamiro e LEGION mupfungwa dzevatengi, sezvo mamwe ma OEM ari kuita nemitambo yemitambo (Asus neROG, Acer nePredator).
Mamiriro acho e LED anoiswa kune rumwe rutivi, kure kure nemushandisi, asi bhodhi remhepo iri pasi pechigadziko uye nguva dzose rinopenya, izvo zvinenge zvichishungurudza paunotarisa firimu mune imwe nzvimbo yerima, asi zvingave zvakanaka kuti iwe ' Idzidza kusazvidza.
Sezvaunenge uchienda kune imwe nzvimbo, iwe unogona kutaurira kubva kumabhezeri akatenderedza muchengeti iyi iyi kombiyuta yakaoma. Icho chichiri chigamba chikuru pasi, kunyange ne-8 mm bezels kumativi maviri uye pamusoro peLenovo yaifanira kutora mhino-cam pasi pekuratidzwa. Legion Y530 imwe yei mashomanana ekutambisa laptops nediki bezels muchikamu chayo, asi kwete imwe yemhando, saAsus anopawo TUF yeMamera FX505 (inowanikwa Q4 2018) uye ndinotarisira kuti vamwe vave nezvimwe zvinhu zvinowanikwa mumwedzi inotevera. The Legion Y530 inopfuvura kupfuura TUF FX505, asi panguva imwechete inorema, inenge 5.2 lbs.
Kana iri yekusarudzwa mune zvigadzirwa, plastiki inoshandiswa kumativi ose kune outer-case uye mukati mechikasi. Chigadziro chemasundu uye chidimbu chebhokisi chinogadzirisa kugadzirisa kunononoka kunofadza kunonzwa kunakidza kumubata, asi kucharatidza smudges nyore nyore. Izvo zvisikwa uye bhezeki zvakakomberedza chinyorwa zvigadzirwa kubva mumapurasitiki epurasitiki, apo hood inowana maitiro akafananidzwa, ane zviduku zvishoma zvinokwira kubva ku LEGION logo. Zvose zviri zviviri izvi zvinonzwa zvishoma zvishoma kana zvichienzaniswa nechomukati.
Chifukidzo chesimbi chingave chiri chakanakidza, zvichida chinokanganisa chakafanana neAusus TUF, sezvo chifukidziro chinonzwa sechinhu chisingatauriki sezvazviri, saka ndinenge ndakangwaririra paine kutakura iyi Legion Y530 muhomwe. Iko mukati kunenge kwakanaka zvakasimba, kunyange kana pane chimwe chikafu mubhokisi rebhokisi.
Sezvaunenge uchiita zvinoitika, Legio inonyatsoomeswa padhesiki nemakumbo makuru maviri emarubha mudumbu. Pasi pano iwe uchaonawo mavhiri makuru mukati mavo mafirimu mukati, nemhepo inotonhora yakabuda kunze kwegrills kumashure, iyo inoratidza kuti Lenovo akanyatsotarisa kugadzirisa kushandiswa kwekombiyuta iyi, uye uchaona kuti izvi zvinoshandura sei kushandiswa kwechokwadi-hupenyu mune chimwe chikamu.
Izvo zvakasikwa zvakagadziriswa zvizhinji zvezvibatanidzi kumashure, izvo zvinotungamirira kumativi asina kukwana uye inoita kuti laptop iyi isarudzo yakakodzera kune vose vakasara uye vakarurama vakapiwa vashandisi. Panguva imwe chete, iwe unoda imwe nzvimbo yakakura kuti tambo dzisunge kunze. IO inopa hukuru hwehutano hwaunoda pane kombiyuta yemazuva ano, asi hapana kadhi-muverengi uye kwete Thunderbolt 3 chikwangwani.
Iyo chinyorwa chinogadziriswa panzvimbo nemahembe maviri maduku, akasimba zvakakwana kuti uichengetedze zvakasimba sekugadzirisa, pamwe chete zvakanyatsogadzirira kukubvumira kuti uisimudze uye kugadzirisa mafungiro nemaoko. Sekuwedzera kweAce pasi payo, sarudzo inobvumirawo kuzarura kuratidzwa kwose kudzokera ku180 digrii, iyo ichauya yakajeka kana uchishandisa laptop pamubhedha kana mune dzimwe nzvimbo dzisiri dzisiri.
Zvose mune zvose, Legion Y530 inowanzofungidzirwa nekombiyuta uye danho-kubva kune yakapfuura Y520, uyewo kubva kune vamwe vakwikwi mukirasi yavo. Ndine mitsara mashomanana nemarongero uye kuvakwa: chifukidzo chepurasitiki-chingave chaive chakasimba uye icho chinogara chichigadzirisa chinetso chemasimba chinoshungurudza zvishomanana, asi izvi pamwe, pane zvishoma zvokunyunyuta pamusoro apa. Zvechokwadi, Lenovo ingadai yakaendawo nemhando yezvigadzirwa zvechivigiro uye bezels, asi ngatirege kukanganwa iyi iyi yepayipi yepamusoro yekutamba yakavakwa nebhajeti mupfungwa.
Legion Y530 nhaka iyo keyboard kubva kuY520, asi nechinokanganisa: kiyi dzinogamuchira kuchena kuchena uye kuchena kwechiedza, panzvimbo yezvinyorwa zvitsvuku zvezera rakapfuura.
Iyo yakarongeka yakawanda kwazvo, uye yakakura uye yakatambanudzwa-makakani makuru nemiseve, asi NumPad yakasikwa isina kugadzirwa uye hapana mazvitsvene akazvitsaurira emabasa echipiri seKusha / End uye PgUp / PgDn. Mukati / kuruboshwe Shift yakagadzirwawo zvakasiyana pakati pekugadzirisa, takava neUnited / US sangano pane iyi sampuli.
Sezvakazoitika kuhutano hunoenda, iyi ndiyo imwe yemakanda angu aidiwa kuti ndisiye mukirasi. Zvisinei, chengetedza mupfungwa iyo inoshandisa zvikwangwani zviduku zvishoma nemhinduro shoma, iyo yakawanda chaizvo zvandinenge ndichishandiswa, asi zvingasava zvevanhu vose, kunyanya kana uri kubva kune imwe yekare.
Iyi keyboard ndeimwe yemhepo yakasununguka kunze uko, uye yakadzokorora, ine mazinga maviri pamusoro pekuchena kwechiedza chokusarudza kubva (Fn + Space). Iwe uchafanirwa kukwira kuLegion Y730 mutsara kuti uwane RGB kujekesa.
Sezvinyorwa zvemashure, vashoma veLegion Y520 vaitenga vakanga vachitarisana nemakwibhodi pamakamuri avo (tsanangudzo pamusoro pemitambo). Legion Y530 haisati inoratidzika kuti inotambudzwa neyemukati yekugadzira kukanganisa, asi izvi zvakadaro chimwe chinhu iwe unofanirwa kuongorora kaviri kana iwe uchida kuwana iyi laptop.
The touchpad haisi iyo yakakura. Icho Chinhu chinogadzirwa nePaccision nechando chepurasitiki uye chinoshandisa kushandiswa kwezuva nezuva, swipes, matepi uye zviratidzo zvakanaka. Zvisinei, pane zvishoma kune 15-inch laptop uye inoshandisa zviratidzo zvekunze pasi pasi. Kazhinji ini ndiri guru guru rekugunzva muviri, asi izvi zvakaoma kwazvo, zvakaoma uye zvakaoma kumanikidza, hazvina kufanana nekushandiswa kwandakaona pane mamwe mabhuku.
Ndinofanirawo kuwedzera kuti Legio Y530 haina kuwana sensor yemunwe, iyo yandakanga ndisingatarisiri mukirasi iyi chero ipi zvayo, asi icho chinhu chaungada pane kombiyuta yako uye iwe haugoni kuwana pane iyi.
Lenovo inowedzera muvhareji-shazha skrini pane iyi laptop, inovandudzwa kubva pane zvatinowana uye Legio yegore rapera Y520, asi kwete yepamusoro-tier inopa pakati pe-2018 mitemo.
Iyo ipS panel ine matte yokuputika, 60 Hz yehuwandu hwekuvandudza, nguva yepakati pezera yekupindura (yakapoteredza 30 ms BTB), pamwe nekupenya kwepakati, kupesana uye kubara kwemavara, sezvaunogona kuona pasi (data yakanyorwa neSypress4 sensor) .
Paneri HardwareID: BOE BOE06FB (NV156FHM-N61);
Nhamba: 95% sRGB, 71% NTSC, 74% AdobeRGB;
Mazuva ano Max ari mukati mekona: 280 cd / m2 pane simba;
Kusiyana kwekupenya kukuru: 700: 1;
Dzvuku pahupamhi hukuru: 0.40 cd / m2.
Izvi zvichaita zvakanaka kumashandiro ezuva nezuva uye zvinyorwa zvemastimedia, asi hazvisi izvo zvakafananidzirwa nebasa-rakarurama basa, risina kujeka zvakakwana kuti ritore munzvimbo dzinovhenekera-chiedza, uye kwete zvakakodzerwa nemitambo seimwe yepamusoro-soro yezvimwe nzira dzakasiyana zvimwe.
Ndakatarisawo ganda rakananga rinoputika kumativi ose ezasi, nebhekisi rinongedza jira munzvimbo shomanana. Ukuwo, rumwe ruzhinji rwePWM (22 GHz) rinoshandiswa pakuchenesa kwemhepo, uye unogona kushandisa calibrated ruvara profile kuti atarise zvimwe zvepachena pikamu uye kusawirirana kwema gamma.
Ndinofanirawo kuwedzera kuti Lenovo inoratidzika kuva inotora mapepa kubva kune zvakawanda zvezvinyorwa, sezvimwe zvinongororwa zvinotaurwa LG Philips kana an AU Optronics panels pamashizha avo. Izvo hazvisi zvakasiyana zvakasiyana neboka reBBOE pachikwata chedu chekuedza, icho chiriko chiripo muzvitoro muEastern Europe.
Zvose mune zvose, izvi hazvirevi kutarisa zvakaipa kwe $ 800- $ 1000 yemari yezvikamu, asiwo kwete pairi ne iyo 120 uye 144 Hz inoongorora iwe uchawana nevamwe vekumikwikwi. Lenovo inotaura nezve 144 Hz 300-nit panel yenzira yeLegion Y530 zvakare, asi iyo haisati yasvika panguva yekuongorora uku uye inongochengetwa chete kune Legion Y730 mutsara. Iwe unofanirwa zvakadaro uchitaridzire panguva iyo uri kuverenga nyaya yacho.
Tinofanira kuedza kugadzirisa kwepamusoro-kwekupedzisira kweLenovo Legion Y530 series, necheseti yeIntel Core i7-8750H, inonzi GTX 1050 Ti mifananidzo uye 8 GB yeDDR4 RAM, asi chete 7200 rpm HDD.
Kushaikwa kweSDD kunodzivisa hupenyu hwose, asi munyaya iyi mutengi aiva nebhajamiro shoma uye akasarudza yeI7 CPU uye kwete SSD, kuronga kuwedzera imwe gare gare, uyewo kuwedzera mamwe RAM.
Iwe unoda kubvisa jira rekumusoro rinobata panzvimbo neine zviduku zvezviko, zvose zvinoratidzika, kuitira kuti upinde mukati. Iwe uchasvika pamakona maviri emakiromita emadhora, mudziyo we-Wi-Fi, unonzi M.2 80 mm PCIe yekuchengetedza, pamwe chete ne2.5 "storage bay. Zvose zviri zviviri zvinogona kuchengetwa zviri nyore, asi RAM yakavanzwa mushure mesimbi inonzi radiator / nhoo iyo yaunoda kunyatsobvisa pakutanga. Vhidhiyo iri pasi apa inoratidza kuti ungapinda sei mukati meLegion Y530 uye nzira yekuwana nayo zvikamu zvakasiyana-siyana (haufaniri kubvisa bhati, asi unogona kuisunungura kuti udzivirire zviduku chero chipi zvacho).
Kusvika pakuita mashandiro acho, yedu yemhando bvunzo yakanzwa isinganakidze. Chekutanga Windows zvinyorwa uye kuiswa kwepurogiramu zvinotyisa zvishoma pasina SSD, asi kana izvo zvangoitwa, iyo Y530 inobata mabasa ezuva nezuva nekuita kushoma, ichimhanya inotonhorera uye yakanyarara.
Iwe unoda iyi kombiyuta kuita mamwe mabasa anodiwa uye mimwe mitambo kunyange zvakadaro.
Tinoedza maitiro eCCU mumabasa ekuda mabasa nekufananidza nekuenderera kwe100% mutoro neCinebench R15. I7-8750H processor ine kasi yeawa ye 2.2 GHz, asi inokwanisa Turbo kusvika ku 3.9 GHz mumatambudziko ose.
Kunze kwebhokisi, muenzaniso wedu wakaita zvakanaka. Iyo CPU's Turbo Inoenderera ichiderera chete ku3.5-3.6 GHz muCinebench yakatarisana inomhanya, mhinduro dzinodzokera pakati pe1130 kusvika ku1180 points. Iyo inosvika pakupisa kwe94-95 Celsius.
Isu tinopfurikidza neCPU pane zvidzidzo zvedu kuti tive nekuvandudza kushanda nemitoro inoshusha (kuvandudza Turbo Speeds) uye kutsika kwakadzika / simba rekudya nemabasa ezuva nezuva. Ichi chinyorwa anotsanangura kuti ungaita sei saizvozvo.
I7-8750H yakagadzikana pa -110 mV uye izvi zvinoshandura mumigumisiro shomanana muCinebench mimwe miedzo yekuedza. Sezvaunogona kuona pasi apa, CPU haina kumboburuka pasi peC3.8 GHz munyaya iyi, iyo inoshandura mumiganhu inotarisana neP1200-1220 nhamba mumitambo yakatarisana. ICU inoramba ichisvika ku94 digrii Celsius, asi nemhaka yemhepo yakaderera haifaniri kutomira pasi kuitira kudzivirira nyaya dzemafuta.
Kana iwe uchifarira nhamba-yakasvibirira, heino izvo zvatinazvo muzvikwereti. Ramba uchifunga nezvekushaikwa kweSSSD inotora zvinetso mune zvimwe zviedzo.
3DMark 13 - Moto Strike: 6896 (Graphics - 7683, Physics - 14993);
PCMark 08: Musha Unokodzera - 3491;
PassMark: Nhamba: 4676, CPU mark: 12257, 3D Graphics Mark: 6394;
x264 HD Benchmark 4.0 32-bit: Pfuura 1 - 192.38 fps, Pfuura 2 - 71.89 fps.
Isuwo takamhanyira vamwe vavo pa -110 mV isingazivikanwi profile:
3DMark 13 - Moto Strike: 6938 (Graphics - 7711, Physics - 15837);
x264 HD Benchmark 4.0 32-bit: Pfuura 1 - 192.37 fps, Pfuura 2 - 76.37 fps.
Kungofanana nekucherechedza muCinebench kuedza, kusazvidzora kunoshandura mumagariro ekubudirira kunowanikwa nemitambo yakasiyana-siyana, pamwe nechepasi CPU power-drain uye zvishoma nezvishoma kutonhora kweCUU.
Sezvo kune kutambira kunofamba, sarudzo yedu yakagadzirirwa neGTX 1050 Ti GPU ne 4 GB yeGDDR5 yekuyeuka. Kubudirira kunobvumira Turbo clock kukurumidza kusvika ku 1.75 GHz uye sezvaunogona kuona pasi apa, GPU inoshandiswa inogadzikana kune dzose mazita akaongororwa, pasina madonhwe emagetsi kana zvimwe zvinetso.
Nhamba yeCUU inotarisa kune rumwe ruoko ruoko rwunoshandura pakati pe-high-turbo inotenderera ye 3.9 GHz uye ye2.2 GHz isina kukwana. Icho chimiro chisingadikanwi, asi haisi kushandura mune chero rudzi rwemhando yekutengesa kana zvimwe zvinenge zvisingadikanwi mumitambo. Kugadzirwa kwebheteri kune rumwe rutivi rwakakosha, uye zvose CPU neGPU zvinodzivira pasi zvakanyanya munyaya ino. Mashoko ari pasi apa.
Heino izvo zvatinazvo muzviedzo zvedu, pa FHD chisarudzo uye hukuru maikirwo maitiro. Takawedzerawo zvinyorwa zveGTX 1050 Ti laptops, zvichibva pane zvatinoongorora uye mavhesi notebookcheck.net, iyo ine dziva guru rezvigadzirwa zvakaedzwa.
Y530 Avhareji GTX 1050 Ti
Mumvuri Mordor 59 the 58 the
guva Raider 67 the 65 the
Rise of PAGUVA Raider 42 the 44 the
Bioshock Infinite 75 the 73 the
FarCry 4 59 the 52 the
Kusava nekodzero kweCUU kune zvishoma, asi kugamuchirwa pamagetsi, sezvo CPU neGPU vachigovera chimwe chezvinhu zvinotonhora kupisa uye kupisa kunogona kubva kune imwe kune imwe.
Mune Far Cry 4, iyo inonyanya kutsvaga muhurukuro yedu, iyo CPU inogadzirisa kumativi e-85 Celsius (ine spikes kusvika ku 94 C) uye GPU kune 75 Celsius mushure memaminitsi 15 + ekutamba, pane purogiramu isina kukwana. Mushure mekudzivirira CPU ku -110 mV, iyo CPU inogadzirisa nepamusoro pe 78-80 C (ine spikes ku 85 C), nepo GPU inogadzika kumativi anokwana 72 digiri Celsius. Izvi hazvishanduri mumhando ipi zvayo yekubudirira, kusina kuchinja mumhepo yevhiri uye zvisinganyanyi kuitika kune kunze-case thermals.
Emissions (rwiyo, kupisa), Kubatanidza uye kutaura
Legion Y530 inowana sarudzo yakanyatsogadziriswa yakanyatsogadziriswa pamusoro payo yakatangira, uye imwe yezvinhu zvakaoma zvakagadzirwa mukirasi iyi (mufananidzo weDave2D pane Youtube, Handina kuzarura muenzaniso uyu).
Inosanganisira vaviri mafani uye matatu kupisa-mapaipi, imwechete kune imwe chete CPU neGPU, pamwe chete nemunhu mumwechete akapfava heatpipe mumwe nomumwe. Iyo inopedza nguva yakareba inopinza mavheti, nevarairiri kumativi ose ari kumashure uye pamashure, uye iwe unogona kuona kuti mapuranga eCUU / GPU anopararira kune zvikamu zvakasiyana-siyana zvakapoteredza.
Izvi zvakasara, Y530 inowanikwawo zvakakwana pamusana pepasi uye pamativi ekumativi, pamwe nekubuda kwakakwana kumucheto kumashure. Sezvenhare, haufaniri kuvanza, uye funga kuchenesa mavhesi evhuva nguva nenguva, sezvandiri kutarisira kuti iungane nyore nyore pakati pemafuta nemhando iyi yemuumbi.
Zvose mune zvose, izvi zvinotonhora zvinoramba i7 CPU neGTX 1050 Ti mifananidzo iripo. Legion Y530 inomhanya yakanyarara nekushandiswa kwezuva nezuva, uye mafambi anogara nguva zhinji. Handina kuwana chero ipi neipi yakashambidzwa nemuenzaniso wedu, asi kubuda kweHDD ishoko remheremhere raunonzwa paunowanikwa, munzvimbo dzakanyarara.
Vanokwira kusvika ku50 dB pamusoro-soro mumisangano yekutamba kwenguva refu, iyo inonzwika zvakanyanya kune 1050 / 1050 Ti yemitambo yekutamba, uye zvinoreva kuti iwe ungangove uchida kubatanidza dzimwe headphones pakutamba mitambo. Zvakakosha kuwedzera kuti hatina kushandisa Lenovo Vantage kushandiswa pane test sample yedu, iyo inopa huwandu hwemaprofayiti ehupi, asi hupenyu hwedu hwekare nehuyu hunoti huri nani kuidarika, sezvo hunovhiringidza kushanda.
Sezvo kune kutonhorera kuenda, hezvino zvatinazvo:
* Kutakura - kutamba FarCry 4 kwemaminitsi anenge 30 pane ultraFD settings
Sangano redu reY530 rakashambadza nekushandiswa kwezuva nezuva, izvo zvinonzwisisika zvakapiwa kuti vateveri vacho havasi kushanda, asiwo kunopisa nemitambo, uye zvikamu zvemukati kusvika kusvika pakati peC50 digiri Celsius. Kuvharidzira kunoderedza kutsetseka uku ne 1-3 digrii, asi kunyange zvakadaro laptop iyi inoramba iine mumwe wevanhu vanonyanya kupisa mukirasi yavo, inopisa kupfuura Acer Nitro 5 kana Asus TUF FX505. Iyo michina uye mukati mazvo zvinoramba zvakanyanyisa, asi zvakanyanya kuoma kunokonzera kunogona kungoita zvakanyanya mukati mukati mehuwandu hwemufananidzo, saka iwe unoda kuchengetedza izvi pane dawati uchiri kutamba mitambo uye usati wavhara chero ipi zvayo inowanikwa / yakazara.
Pane Gigabit Lan, Wireless AC uye Bluetooth 5.0 paLegion Y530, saka zvakanaka chaizvo zvaunotarisira pane imwe yepanhare. Iyo Intel 9560 wi-fi module inoita zvakanaka chaizvo zviviri pedyo ne router uye pa 30 tsoka nemadziro mukati.
Kana vari ivo vatauri, vanopisa kuburikidza nekacheka kadiki pamucheto wepamberi, naizvozvo zvisingatauri mudumbu uye haigoni kuvharwa nyore nyore. Vanonyatsodanidzira (kusvika ku78 dB pamusoro-wepamusoro) uye yakawandisa muvhareji mumashoko ehutauti zvakare, nemasikirwo akaenzana uye akakwirira, asi zvishoma pamagumo ekupedzisira. Handina kumboona kusanzwisisika kwakajeka kana kudengenyeka kunyange, kunyange kunyange pamakore akawanda.
Iyo webcam (uye microphone) inoiswa pasi pechikwangwani uye logo yeLegion pasi ipapo, saka inenge yakawanda semhino-mumhino sezvazvinogona kuva. Hazvina zvakawanda maererano nehupamhi hwemifananidzo kana, zvimwe zvichaita kune dzimwe nguva kudana, asi kwete nekushambadzira nezvimwewo zvakawanda.
Kune 51.5 Wh bateri mukati meLegion Y530, pamusoro pevhareji yekirasi iyi. Kunyange nechezasi-kuchenesa skrini haufaniri kutarisira kupfuura maawa 3-4 ekushandiswa kwezuva nezuva pamutengo, nguva shoma nemavhidhiyo, uye kunyara kwemaminitsi e50 panguva yemitambo.
Hezvino izvo zvatiinazvo muzviedzo zvedu, nehwindo rakagadzirirwa pa 40% kupenya, zvinenge zvikamu zve120.
11.8 W (~ 4 h 20 min yechishandiswa) - kunyatsoongorora nekukanyora magwaro kuGoogle Drive, Better Battery Mode, skrini pa40%, Wi-Fi ON;
12.1 W (~ 4 h 20 min yechishandiswa) - 1080p video yakazara yakazara pane Youtube muEdge, Better Battery Mode, skrini pa40%, Wi-Fi ON;
10.2 W (~ 5 h yemashandisirwo) - 1080p fullscreen .mkv mavhidhiyo muIndaneti yeApp, Better Battery Mode, skrini pa40%, Wi-Fi ON;
10.8 W (~ 4 h 45 min yekushandisa) - 4K fullscreen .mkv mavhidhiyo muIndaneti, Better Battery Mode, skrini pa40%, Wi-Fi ON;
18.8 W (~ 2 h 40 min yechishandiswa) - kushandiswa kwakawandisa muEdge, Better Performance Mode, skrini pa40%, Wi-Fi ON;
60.0 W (~ 50 min yekushandisa) - kutamba, Best Performance Mode, skrini pa40%, Wi-Fi ON.
Iyi laptop inouya ne-135 Wh yezvigetsi zvesimba uye haigoni kutengesa, saka mari yakazara inotora zvishoma paawa ye2.
Iniwo ndakaona kuti hurongwa hwedu hunodurura simba rakawanda kudarika zvidhinha zvinopa pavanenge vachitamba mitambo yakaoma zvikuru, asi kusazvidzora CPU kunobatsira nenyaya iyi.
Iyo Lenovo Legion Y530 inowanikwa munzvimbo dzepasi pose munyika dzakagadziriswa, nemitengo inotanga pa $ 750 muU.S. uye EUR 800 muEurope nenguva yechinhu ichi.
Nheyo yebhayoti inouya neCore i5-8300H proto, 8 GB ye RAM, Nvidia GTX 1050 mifananidzo uye 1 TB inotenderera HDD. Izvo zvakanaka zvakakwana, asi tinogona kuratidza kuenda kumagadziriro eGTX 1050 Ti kana iwe unonyanya kufarira iyi kombiyuta kutamba mitambo, sezvo shanduro yeTi iri 15-25% nekukurumidza kupfuura yeGTX 1050 Chip chip.
Yon anogonawo kusarudza kugadziriswa neSSD yekuchengetedza uye RAM yakawanda, pamwe chete nepamusoro ekupedzisira version nematanhatu ekutanga i7 CPU, asi iwe unogonawo kuwedzera RAM uye SSD iwe pachako, nepo i7 inofanirwa kuwana chero bedzi iwe ' regai kuisa mahara-matanhatu ekushanda zvakanaka mumabasa akawanda, asi kwete zvekugamba.
Tevera hukama huno hwekugadzirisa nekugadziriswa kwezvinhu uye nematombo panguva iyo uri kuverenga nyaya ino.
Legion Y530 ndeimwe yekanakisisa ye-bang-for-the-buck kumativi ose kana kuti kupinda mazinga-mapepa emakambani ekutamba iwe unogona kupinda muhafu yepiri ye2018 uye chikamu chekutanga che2019.
Sezvo kune kutamba kuri kuenda, ndinogona kuratidza kusarudza kwekugadzirisa neGTX 1050 Ti mifananidzo, i5 pro processor uye zvichida SSD yeOs, iyo inotengesa kudarika $ 900 panguva iyi iyi. Izvi zvichaita zvisina kukwana uye zvichakubvumira kuti utambe mazita akawanda paFDD resolution uye yakanakisa machirongwa emifananidzo, zvose ikozvino uye inotevera 1-2 makore. Gamers ichasasikirwa neRGB kumhanya kana kuvhara kwekutsvaga paY530, iyo iyo nguva iripo chete inowanikwa nePaneji 60 Hz, asi inofanirawo kugamuchira vateereri vanonhesa uye masikati makuru.
Pamusoro peiyo, kana kutamba ndiko izvo iwe unonyanyofarira, GTX 1060 kushandiswa ndiyo nzvimbo yakanaka ikozvino, sezvinongoita 25% nokukurumidza uye unogona kuwana mazuva ano kune pasi pe $ 1000. Lenovo haisi kupa Y530 nerudzi urwu rwemifananidzo, asi unogona kuitora paLegion Y730 yepamusoro.
Kutamba nechekuita, Legion Y530 inoyevedzawo yose-yakazara. Maitiro akajeka, kugadzirwa kwekombikiti, yekukurumidza uye yakanyarara keyboard, basa rakanaka uye vatevedzeri vanyarara mukushandiswa kwezuva nezuva ndiyo nheyo dzaro dzekutengesa, dzakatsigirwa nemitambo yakakwikwidza zvikuru munzvimbo dzose dzakapoteredza pasi. Kune rumwe rutivi, vatengi vangangodaro vanofanira kubvuma chete chiyero chemahwindo nemapurisa, shanduro yose-plastiki, clinky touchpad uye asingatarisi yakagadzirirwa mhino-cam.
Zvose mune zvose, pane kukwikwidzana kweLegio Y530 kumucheto wepasi, mu $ 750 kusvika $ 800 mutengo-wakatarisa, asi pane zvimwe zvingasarudzwa zvokufungisisa: Acer Nitro 5 (kazhinji zvinodhura), the Asus TUF FX504 (120 Hz screen) uye TUF FX505 (144 HZ IPS skrini, RGB keyboard, rakaoma kuvaka), the HP Pavillion Gaming 15 kana Dell G5 Mutambo. Mumwe nomumwe ane zvaanoita uye zvakashata uye hakuna mumwe munhu anonyanya kukoshesa mabhuku kupfuura Legion Y530, asi iwe unofanira kuzviongorora kuti uzive zvose zvaunosarudza uye uite chisarudzo chakanaka chakanyorwa.
Izvi zvinoputika-up review yedu yeLenovo Legion Y530. Chikamu chinotsanangurwa pasi apa chakazarurirwa mhinduro dzako, maonero nemibvunzo, saka usanonoka kupinda mukana.
Laptop laptops neNvidia 1050 uye 1050 Ti mifananidzo: mavhidhiyo ehurukuro uye bhajheti
Isu tinofananidza Lenovo's Intel-based Legion 7i neiyo AMD-based Legion 7